Forum serasera malagasy Ny fanalana zaza na avortement eto Madagasikara. - Dinika forum.serasera.org
Ny fanalana zaza na avortement eto Madagasikara.
Fitohizan'ny hafatra : Ny fanalana zaza na avortement eto Madagasikara.
RoseEliade - 25/11/2019 14:33
Miarahaba tompoko, mpianatra ny tenako ary mangataka fiaraha-miasa avy aminareo raha mba mety. Mitodika aminareo vehivavy manokana ny tenako. Manao fanadihadihana momba ny avortement/ fanalan-jaza/fampitsaharana vohoka aho, manan-kambara ve ianao? Efa nanala zaza na tsia? Misy fitakiana tianao hatao? Io dia sehatra ahafahanao maneho hevitra an-kalalahana. Misy fanontaniana vitsivitsy tiako apetraka aminao amin’ny alalan’io sondage io. Marihiko fa izaho dia tsy mandrara no sady tsy mamporisika ny fampitsaharana vohoka, neutre tanteraka aho, recherche ny ahy no ataoko, maro loatra ny vehivavy maty vokatran’izy io, koa vahaolana mahomby izao no tadiavina.
1) Resaka matotra io, lohahevitra saro-pady ary anisan’izay tena manahirana ary indrindrindrindra, miankina aman’aina, koa iangaviana mba izay tena vonona ny hamaly ireo fanontaniana sy haneho hevitra no miroso amin’izany. Aoka mba hifanaja.
2) Marihina ihany koa fa tsy misy mahafantatra anao any, anonyme tanteraka ny sondage, tsy mifandray velively amin’ny facebook ka tsy misy tokony hatahorana. Na izaho aza tsy mahafantatra an’iza n’iza, fa ny valin-teninao ihany no mipoitra any, ka ny valin’ny fanontaniana no angonina hamohahana résultat satistika.
Indro ny lien ahafahanao mandray anjara amin’ny famaliana ireo fanontaniana:
Mankasitraka indrindra tompoko. Raha mila fanazavana fanampiny ianao dia mp.
Felantsoa14 - 27/11/2019 18:10
Nanao ilay sondage aho dia obligé namaly champs sasany na dia tokony afaka tsy mamaly aza.